Dowlada Sacuiudiga oo Deeq Daawo ah soo Gaarsiisay Soomaaliya – Gedo Times
Dowlada Sacuiudiga oo Deeq Daawo ah soo Gaarsiisay Soomaaliya
7th December 2017 admin Wararka Maanta 0
Diyaarad sidday deeq dawo ah oo dowladda Sucuudigu ay ugu deeqday Soomaaliya ayaa soo gaartay magaalada Muqdisho, taasi oo dowladda Soomaaliya lagu wareejiyay si loogu adeego bulshada.
Waxaa sidoo kale diyaaraddaasi saarna qaar ka mid ah dad Soomaaliyeed oo dhaawacyo qabay kuwaasi oo muddo 6 bilood ah lagu daweynayay dalka Sucuudiga kadib markii ay ku dhaawcmeen qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho muddo laga joogo dhowr bilood.
Wasiir ku xigeenka Wasaardda gargaarka Xukuumadda Soomaaliya ahna kusimaha Wasiirka Cilmi Cumar Ceynsanye ayaa uga mahadceliyay dowladda Sucuudiga sida ay u garab taagan tahay Soomaaliya.
Tan iyo markii uu dhacay qarixii 14kii Oct-waxaa sii kordhayay gurmad kaladuwan oo ka kala imaanaya wadamada Caalamka,Sucuudiga ayaa kamid ah wadamada sida aadka ah u taageera Soomaaliya, gaar ahaan dhanka gargaarka.
Xigasho Warbaahinta qaranka
Madaxwaynaha soomaliya ayaa guddoomiyay shirka hannaanka dib u eegista Dastuurka (SAWIRRO)
Maqal iyo Muuqaal:Olole Nadaafadeed ayaa laga sameeyay magaalada Caabudwaaq ee gobalka Galgaduud